Reno4 Pro | OPPO မြန်မာ
3D Curved Borderless Sense Screen
ချောမွေ့ပြေပြစ်ပြီး ခေတ်ရှေ့ပြေးသော အဝေ့အဝိုက်၏ အလှတရားကို ခံစားသိနိုင်ပါသလား။ 3D မျဉ်းကွေး ရုပ်ထင်မှန်သားက ရှုထောင့်တိုင်းအတွက် ပြေပြစ်လှပမှုကိုပေးစွမ်းပြီး ပုံရိပ်ပြသသည့်နှုန်း refresh rate 90Hz ပါဝင်သည့်အတွက် ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့မှုရှိစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခန့်ညားလှပရုံမျှမက မြင့်မားသော နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် အသွင်ကိုပါ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သောကြောင့် ပြီးပြည့်စုံမှုကို ခံစားထိတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃၆ မိနစ်ပဲ လိုပါတယ်²
အစည်းအဝေးနားချိန် ၅ မိနစ် အတွင်း ၂၇% အထိ အားသွင်းနိုင်စွမ်းရှိသလို ၁၀ မိနစ် အချိန်ပေးရုံဖြင့် ၄၉% အထိ အားဖြည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။ ၁၀၀% အားပြည့်ရန် ၃၆ မိနစ်ဆို လုံလောက်ပါပြီ။ လျှင်မြန်စွာအားဖြည့်ပေးရုံမျှမက ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိကြောင်းကို TÜV Rheinland ၏ အမြန်အားသွင်းစနစ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ထောက်ခံချက် ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်ရှေ့ပြေးဖြစ်သော အမြန်အားသွင်းစနစ် 65W SuperVOOC 2.0 ဖြင့် ဖုန်းအားသွင်းခြင်းကြောင့် ကုန်ဆုံးသွားမည့်အချိန်များကို လျှော့ချပစ်လိုက်ပါ။ အစည်းအဝေးနားချိန် ၅ မိနစ်အတွင်းမှာပင် ၃၀%+ ရရှိအောင် သွင်းပေးနိုင်ပြီး တစ်ခဏတာ မှေးစက်အနားယူချိန်သာဖြစ်သည့် ၁၀ မိနစ်အတွင်း ၄၉% ဘက်ထရီပမာဏရရှိအောင် အားသွင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ၁၀၀% ဘက်ထရီပမာဏရရှိစေရန် ၃၆ မိနစ်သာလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အလျှင်အမြန်ဆုံးနှင့် လုံခြုံစိတ်ချမှုအရှိဆုံး အားသွင်းနိုင်ရန်အတွက် TÜV Rheinland မှပေးအပ်သော ဘေးအန္တာရယ်ကင်းရှင်းစွာ အလျှင်အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ထောက်ခံချက်ကို ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
လှုပ်ရှားဆဲ အခိုက်အတန့်ကို အမိအရ ဖမ်းယူရိုက်ကူးခြင်း
ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အခိုက်အတန့်တိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ဖို့ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်အစွမ်းကို 240fps မှ 960fps အထိ လေးဆမြှင့်တင်ထားပါသည်။
Reno4 Pro ၏ ရှေ့ကင်မရာနှင့် နောက်ကင်မရာတွင် AI နည်းပညာသုံး ရောင်စုံအလှဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါသည်။ သင့်ပုံရိပ်ကို အဖြူအမဲနောက်ခံ ဗီဒီယိုပေါ်တွင် ဖက်ရှင်ကျကျ လှပနေစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
*1. ပုံသေ default ထားရှိပါက မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြသသည့်အကြောင်းအရာပေါ်လိုက်၍ ပုံရိပ်ကို ပြသသည့် screen refresh rate သည် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Setting သို့ သွားရောက်၍ Auto Select, 90Hz သို့မဟုတ် 60Hz စသည်တို့ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
*2. Reno4 Pro ၏ ဘက်ထရီ 100% အပြည့်အားသွင်းရန် ကြာချိန် ၃၆ မိနစ်ကို တိုင်းတာရာတွင် OPPO ၏ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းနိုင်သောအချိန်သည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ သို့မဟုတ် မတူညီသော အခြေခံအကြောင်းတရားများ - ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ အသုံးပြုပြီးနောက် ဘက်ထရီစွမ်းရည် စသည်တို့အပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။